सुत्केरी मसला : के महिला, के पुरुष ? - Nepal's No.1 News portal
सुत्केरी मसला : के महिला, के पुरुष ?
हामीले कुरा गर्दै जादा पार्वती भुर्तेल अर्थात आमाको सुत्केरी मसलाले हामीलाई एउटा कुरा गर्नुभयो, “सुत्केरी मसला भनेर चिनिने यसलाई हाम्रो घरमा औषधी पुवा भनिन्छ,अझ माया गरेर हामी कालो पापा भन्छौं।आमाले हरेक बर्ष जाडोमा बनाउनुहुन्थ्यो, तर आफूले खान जुरे पो।पहिलो चोटी आफै बनाए,मिठो भो,घर हरहर वासना आयो,ठ्याक्कै पहिला आमाले पकाउॅंदा जस्तै अनि एक दुई जनालाई चाख्न दिए सबैले मिठो भयो अज बनाउनु भन्नु भयो दश जानलाई मिठो लागे पछि पक्कै पनि धेरै नेपाल दिदिबहिनीलाई पनि मिठो लाग्छ होला भनेर यो ब्यबसाय गर्न सुरुवात गरे अहिले धेरै नेपालीलाई थाहा भयो आमाको सुत्केरी मसला के हो भनेर यसमा म खुसी छु” अडर अनुसार बनाउने गरेको छु। धेरै सुत्केरी महिला खुसी हुनुहुन्छ आमाको सुत्केरी मसला खाएर।
सुत्केरी मसला खान मन लाग्यो भन्या आमाले झन्डै मार्नु भएन कस्तो नराम्रो सोच्ने चलन मनलाको कुरा खान पनि अरूलेके भन्ला भनेर डराउनु पर्नी नाम सुत्केरी मसला भए पनि घरका सबै परिवारका लागि सूक्ष्म पौष्टिक प्रदान गर्ने वस्तु बन्थ्यो।
बच्चा जन्मिएपछि ६ हप्तासम्मको अवधि सुत्केरी महिलाका लागि निकै संवेदनशील छ । यो समयमा बच्चासँगै महिलाले आफ्नो निकै ख्याल गर्नुपर्छ । गह्रौँ भारी उचाल्नु हुँदैन, छिटो–छिटो हिँड्नु हुँदैन । प्रशस्त आराम गर्नुपर्छ । बच्चा जन्मिएसँगै सुत्केरी महिलाले यस्ता कुरामा ध्यान दिए बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
जाडोमा हरेक मानिसमा हाडजोड्नी दुख्ने समस्याहरु हुने गर्छ। त्यसैले सुत्केरी मसलामा उच्च पौष्टिक आहार हुने हुदाँ महिलाहरुको त्यस अवस्थाको कमजोर मांसपेसी एवम हाडजोड्नीवलियो बनाउनेका साथै बच्चालाई आमाको दुध प्रसस्त खुवाउन मद्दत गर्दछ। यो मसला अन्य कामकाजी महिलाहरुले पनि जाडो महिनामा सुत्केरी मसलाको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
आमाको सुत्केरी मसला नै किन ?
३० वोटा थोक बस्तुबाट बनेको सुत्केरी मसला!
यस सुत्केरी मसलामा आयुर्वेदिक जडिबुटी तथा मसलाहरु को मिश्रण भएकोले तपाइको रोगसंँग लड्ने क्षमतालाई बढाउनुको साथै तपाईलाई सधै तन्दुरुस्त राख्दछ। विषेश गरि सुत्केरी महिलाले आफु र आफ्नो बच्चा को स्वास्थ्य लाभ को लागि खाने तथा शारीरिक कम्जोर महिला, पुरुषले आफ्नो प्रतिरक्षा बूस्ट गर्न के महिला, के पुरुष सबैको लागि आमाको सुत्केरी मसला !